Home Wararka Muddo xileedka Farmaajo oo 30 maalmood ka hartay “Maxaa la filan karaa...
Muddo xileedka Farmaajo oo 30 maalmood ka hartay “Maxaa la filan karaa 8 Febraayo 2021”?
Laga bilaabo Maanta oo Khamiis ah Madaxweyne Farmaajo waxaa Muddo Xileedkiisa xafiiska Madaxweynaha uga harsan 30 Cisho.
Ololaha Doorashada Madaxweynaha iyo Mida Kuraasta Baarlamaanka sidii la rabay uma socdaan oo MW Farmaajo wuxuu rabaa ama qorsheystay Doorasho ku shubasho ah.
Kaaga darane In Dalku doorasho aaday si fiican looma dareemin ilaa Hadda Muqdisho iyo Gobollada dalka, maadaama caqabado dhanka doorashada ah ay taagan yihiin.
MW Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku xarbinaya sidii Xukunka uu dib ugu soo laaban lahaa, isagoo sameystay Guddi Doorasho, iyo bedelka Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlabaanka JFS, taasoo keentay in Mucaaradka ka biyo diidaan hannaanka Doorashada uu rabo Farmaajo.
Waxa jiray muddooyinkii dambe dad Baraha Bulshada habeen tiris ka bilaabay oo Inta udhiman Madaxweynaha Xilkiisa sugi weysan.
Oo Maxaa Dhici kara Hadii Doorasho la qaban waayo 8 Feb 2021?
Mudane Farmaajo ayaa looga cabsi qabaa in Doorashada boobo isagoo isticmaalaya awoodda xafiiskiisa si ,si uu mar kale xukunka usii joogo, Balse Beesha Caalamka ayaa hadda ku jirta Xalka gaarista Qalalaaso Doorasho wadar ogol ah oo dhacda, ama in uu xafiiska banneeyo Farmaajo.
Hadii 9 Febraayo 2021 la gaaro iyadoo Madaxweyne iyo Baarlamaanka dalka laheyn waxaa socda dadaallo lagu abaabulayo Bannaanbaxyo nabadeed oo aan kala joogsi lahayn, kuwaasoo socon doona ilaa uu xafiiska ka banneeyo Farmaajo, waxaana shacabka Muqdisho isla garteen in aanay marnaba dhicin rabshada keeni kara xasilooni darro mar kala ka dhacda Caasimada Muqdisho.